«Fiba 3×3» – Analamanga : nangotraka ny fifaninanana | NewsMada
«Fiba 3×3» – Analamanga : nangotraka ny fifaninanana
Tontosa ny faran’ny herinandro teo, tetsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina ny fiadiana ny tompondakan’Analamanga teo amin’ny Fiba 3×3, taranja basikety ho an’olon-telo miaraka.
Niady ny fifaninanana tamin’izany ary samy tsy nanaiky lembenana ireo ekipa marobe nandray anjara. Saika tazana nilalao sy nifaninana tao anaty ekipa ihany koa ireo mpilalao kalaza eto Analamanga. Samy nampiseho ny fahaiza-manaony avokoa izy ireo tamin’izany.
Raha ny mikasika ny hetsika, izay sambany nisy fifaninanana ofisialy teto amintsika, basikety lalaovina amina an-tsasan-kianja ka mpilalao efatra no mandrafitra ny ekipa mpifaninana tsirairay avy. Izany hoe, basikety ho an’olon-telo miaraka ny Fiba 3×3. Mpilalao telo no mikatra kianja ary ny iray mpilalao fiandry.
Ankoatra izay, iny hetsika iny koa no nahafahan’ny ligin’Analamanga namoaka ireo mpilalao folo tafavoaka voalohany hisolo tena an’Analamanga amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara. Hetsika hotanterahin’ny federasiona (FMBB), ny 30 sy 31 janoary izao, etsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina. Marihina fa ekipa 20 avy amin’ireo ligim-paritra no hiady ny lohany nasionaly amin’izany.